How'd it happen and more reports?: မြန်မာကျပ်ငွေကျဆင်းရခြင်းအပေါ် ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်
၂ဝဝ၈ခုနှစ်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကပ်ကြီး၏ ဆိုးကျိုးများကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံအများ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ကြုံခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုများကျဆင်းကာ အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် တခြားနိုင်ငံများတွင် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု မရှိသလောက်အခြေအနေအထိ ရောက်ရှိခဲ့ ကြပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုနှင့်အတူ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည်လည်း မြင့်တက်လာသည့်သဘောရှိ၍ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု လုံးဝမရှိပါက စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလည်း မရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဥရောပ နိုင်ငံများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ စသည့်နိုင်ငံများတွင် ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုကို နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်၍ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရှိလာစေရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လှုံ့ ဆော်မှု (Monetary stimulus) များပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုဆိုသည်မှာ ဈေးကွက်အတွင်း သို့ ငွေကြေးများ ပိုမိုထည့်သွင်း၍ Money supply ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၄င်းနိုင်ငံများ၏ ဗဟိုဘဏ်များမှ Open Market Operations နည်းကိုအသုံးပြု၍ ငွေချေးစာချုပ်များကို ဝယ်ယူကာ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ငွေကြေးများထည့်သွင်း ခဲ့ကြပါသည်။
အကယ်၍ ဈေးကွက်အတွင်း ငွေကြေးများ ပြားနေပြီး စီးပွားရေး တိုးတက်မှုများမြန်ဆန်၍ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုများမြင့်တက်လျက်ရှိပါက Ope Market Operations နည်းကိုပင်အသုံးပြု၍ ငွေချေးစာချုပ်များ ကိုရောင်းချကာ ဈေးကွက်အတွင်းမှ ငွေကြေးများကို နုတ်ယူရပါသည်။
ယင်းသို့ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ငွေကြေး ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးကွက်အတွင်းမှ ငွေကြေး များနုတ်ယူခြင်းကို ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒ ( Monetary policy) လုပ်ဆောင်မှုများဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဗဟိုဘဏ်မှနေ၍ စီးပွားရေး ကပ်ဆိုးကြီးမှ လျင်မြန်စွာ နာလံထလာနိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (Monetary stimulus)ကို ပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းလှုံ့ဆော်မှုအရ Open Market Operations နည်းကိုအသုံးပြု၍ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ငွေကြေးများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် ငွေချေးစာချုပ်များကို တစ်လလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅ဘီလီယံဖိုး လစဉ် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
၄င်းဝယ်ယူမှုများကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်လျှော့ချခဲ့၍ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် ဝယ်ယူမှုများ လုံးဝရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ငွေချေးစာချုပ်များဝယ်ယူမှု လျှော့ချခြင်းကို Tapering ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေး ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာ၍ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးမှု မြင့်တက်လာစေရန်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကျဆင်း စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ မြင့်တက်လာသော်လည်း ရည်ရွယ်ထားသည့် နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခြင်း မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ စီးပွားရေးတိုးတက် မှုနှုန်းနှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ကျေနပ်လောက်ဖွယ်မရှိ သေးသော်လည်း တိုးတက်မှုအခြေအနေများ တွေ့ရှိရ သည့်အတွက် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်မှ ချေးငွေစာချုပ် များဝယ်ယူ၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်ကို လျှော့ချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် ၏ အတိုးနှုန်းကို သုညရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချထားခြင်း အား အချိန်အတိုင်းအတာအထိ ထားရှိဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုများ လျှော့ချလိုက်သည့် အခါ Money supply မြင့်တက်မှုရပ်တန့်သွားမည့်အ တွက် ငွေကြေးဝယ်လိုအားပေါ်မူတည်၍ အတိုးနှုန်းမြင့် တက်သွားနိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်မှ ၄င်း၏အ တိုးနှုန်းကို ၂ဝ၁၅ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းခန့်တွင် တိုးမြှင့်နိုင် မည်ဟု ခန့်မှန်းလျက်ရှိခြင်းကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ် လာငွေကြေးမှာ မြင့်တက်လာပါသည်။
အမေရိကန်အတိုး နှုန်းမြင့်တက်လာပါက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းသို့ Capital flows များ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်း Capital in flows များကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ မြင့်တက်လာ မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်လိုအား များလာခြင်းအတွက်ကြောင့် ထိုသို့မြင့်တက် လာခြင်းဖြစ် ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ရက်မှ အောက် တိုဘာလကုန်အထိ ထိုင်းဘတ်ငွေတန်ဖိုးမှာ ခုနစ်ရာခိုင် နှုန်းခန့် ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။
ယင်းအချိန်အတွင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အိန္ဒိယငွေကြေးတန်ဖိုးမှာ ၂၅ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၁၃ရာခိုင်နှုန်းခန့် အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ပါသည်။
စင်ကာပူဒေါ်လာတွင်ပင် လေးရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျ ဆင်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ပင် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာနှင့်ယှဉ်ပါက နိုင်ငံအများစု၏ငွေကြေးများ ကျဆင်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ တချို့နိုင်ငံ များတွင် ငွေကြေးကျဆင်းရုံတင်မကဘဲ ငွေကြေးအတက် အကျများကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ငွေကြေးအတက် အကျ (Currency volatility) ကို စာရင်းအင်းပညာအရ စံသွေဖည်နှုန်း (Standard deviation) ဖြင့် တိုင်းတာ လေ့ရှိပါသည်။ ငွေကြေးတစ်ခု၏ အတက်အကျသည် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း ပျမ်းမျှစံနှုန်းမှ မည် မျှသွေဖယ်မှုရှိသည်ကို တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စံသွေ ဖည်မှုနှုန်းများပါက အတက်အကျပိုမိုများ၍ စံသွေဖယ် မှုနှုန်းနည်းပါက ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါ သည်။
အထက်ပါအချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း စင်ကာ ပူဒေါ်လာ၏စံသွေဖယ်နှုန်းမှာ သုညဒသမ၂၆ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းဘတ်ငွေမှာ သုညဒသမ၃၄ရာခိုင်နှုန်း၊ အင်ဒိုနီး ရှားငွေမှာ သုညဒသမ၆၁ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အိန္ဒိယငွေမှာ သုညဒသမ၆၃ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။
မြန်မာငွေကြေးမှာ အထက်ပါ ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါ ရီလမှ အောက်တိုဘာလအချိန် အတွင်း ၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ကျဆင်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့သော် မြန်မာငွေကြေးမှာ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပိုမို၍ ကျဆင်းခဲ့သည့်အတွက် ဇန်နဝါရီလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ငွေကြေးမူဝါဒများကို ထိ ရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် ငွေရေးကြေး ရေးစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးခင်အချိန်တွင် မက်ခရိုစီး ပွားရေးဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် Capital flows များကို လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခွင့်မပြုသေးသည့်အတွက် အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ အလွန်အကျွံငွေကြေးကျဆင်းမှု မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ၏ စံသွေဖည်နှုန်းမှာ အောက်တိုဘာလကုန်အထိ သုညဒသမ၂ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည့်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ အခြားနိုင်ငံများနှင့်ယှဉ် ပါက ငွေကြေးအတက်အကျကြမ်းတမ်းမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့သော် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကျသော်လည်း မကျဆင်းဘဲ တင်းခံနေသည့် မြန်မာ့ရွှေဈေးမှာ ကျဆင်းလာသည့်အ တွက် ရွှေ၊ မြေ၊ ငွေဈေးကစားသူများအနေဖြင့် တက်ရိပ် ရှိသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ် ဝယ်ယူမှုများလာ သည့်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ အလွန်အကျွံကျဆင်း လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှ လည်း ဈေးကွက်ပေါ် မူတည်သည့် ငွေကြေးပြောင်းလဲမှု စနစ်ဖြစ်သော Floating စနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ကြောင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက် Trend အရ ငွေကြေးကျ ဆင်းမှုကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလုပ်နိုင်သော်လည်း ပြည်တွင်းဈေးကစားမှုကြောင့် ကျဆင်းလာသည့် ငွေဈေး ကို ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ဗဟိုဘဏ်ငွေကြေးလေ လံတွင် ဘဏ်များမှ လာရောက်ရောင်းချသော အမေရိ ကန်ဒေါ်လာများကို နေ့စဉ် သန်းနှင့်ချီ၍ ဝယ်ယူလျက်ရှိ သည်ဟုသိရှိရပါသည်။
မြန်မာငွေကြေးဈေးကွက်တွင် နိုင်ဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလများ၌ ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းသည့် Seasonal factor ရှိသည့်အတွက် ဗဟိုဘဏ်၏ နေ့စဉ် ဒေါ်လာဝယ်ယူလျက်ရှိသည့်အရှိန်နှင့် ပေါင်းကာ ၄င်းအ ချိန်တွင် ဒေါ်လာဈေး အလိုအလျောက် ကျဆင်းမည်ဟု ယူဆနိုင်သည့်အတွက် ဒေါ်လာဈေးကစားသူများ ပိုက် ဘောမမိစေရန် ပြန်လည်၍ရောင်းချနိုင်သည်ဟု ခန့် မှန်းလျက်ရှိကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့အ ပြင် ဒေါ်လာဈေးတက်ခြင်းကြောင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့မှု များ ပိုမို၍အကျိုးရှိလာမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်အပါ အဝင် ပြည်ပသို့တင်ပို့မှုများ ဒီဇင်ဘာလလောက်တွင် ပိုမိုမြင့်တက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်သောကြောင့် ဒေါ် လာဈေးတက်ခြင်း၏အရှိန်လျော့ကျနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်း ရပါသည်။
လက်ရှိမြန်မာငွေကြေး ကျဆင်းခြင်းသည် သွင်းကုန်များပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းမှုများ ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့သော် ၂ဝ၁၃ခုနှစ် သြဂုတ်လမှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ဖြစ် ပေါ်လျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်တန်ဖိုးများနှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာပေါ်မူတည်သည့် မြန်မာကျပ်ငွေဈေးကို
Regression '' ΔE x Rate = 0.0040 - 0.0085 * ΔImports (R2=0.05; P-value of beta=0.46)
ပြု လုပ်ကြည့်လျှင် ၄င်းအချက်နှစ်ခုမှာ ဆက်စပ်မှုမရှိသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့အပြင် ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ် လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံများတွင် သွင်းကုန် တန်ဖိုးများမှာ ပို့ကုန် တန်ဖိုးများထက် ပိုမို၍များပြားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ဥပမာ- ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် သွင်းကုန်တန်ဖိုးများသည် ပို့ကုန်တန်ဖိုးများထက် အဆမတန်များပြားလျက်ရှိ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနီးပါး Trade deficit ဖြစ်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၂ဝ၁၃ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ Trade deficit မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ဒသမ၆ဘီလီယံကျော်ခန့် ရှိသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ အောက် တိုဘာလအထိ နိုင်ငံတကာ Trend အတိုင်း အမေရိ ကန်ဒေါ်လာမြင့်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း နိုဝင်ဘာလမှစသည့် ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုများသည် ငွေဈေး ကစားမှုများကြောင့် ပိုမို၍ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ မြင့်တက်လာသော ဒေါ်လာဈေးသည် အချန်တိုအတွင်း သာဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ အဆမတန် ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းလာသည့် မြန်မာငွေဈေး သည် ယင်းကာလအတွင်း ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်း သော ထိုင်းဘတ်ငွေ၊ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းလာသော အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးနှင့် ၁၃ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းလာ သည့် အိန္ဒိယငွေကြေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တော်သေး သည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေ ချေးစာချုပ်များဝယ်ယူခြင်းကို လျှော့ချ။ ရပ်တန့်သည့် Tapering အစီအစဉ်ကြောင့် နိုင်ငံအများစု၏ငွေကြေး များ ကျဆင်းလာသော်လည်း Capital Flows များကို လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခွင့်မပြုသေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံအနေ ဖြင့် ၄င်းနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးများလောက် ကျဆင်းမှု ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အဆမတန်ငွေကြေးကျဆင်းမှုသည် ငွေဈေးကစားခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည့်အတွက် ကြာရှည်ကျဆင်းမှုမရှိနိုင်ဟု ခန့်မှန်းကြပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။
WEIGHTS OF ICE FUTURES 'U.S. DOLLAR INDEX (USDX)'
View Interactive Chart»
[ Intercontinental Exchange ] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151712170997754&set=a.10151348473202754.543043.683512753&type=3&theater
The ICE U.S. Dollar Index (USDX) 'futures contract' isaleading benchmark for the international value of the US dollar and the world's most widely-recognized traded currency index. Inasingle transaction the 'USDX' enables market participants to monitor moves in the value of the US dollar relative toabasket of world currencies, as well as hedge their portfolios against the risk ofamove in the dollar. 'US Dollar Index futures' are traded for 21 hoursaday on the ICE platform.